Lautaro Martinez Ma Aha Xalka Barcelona, Waa In Ay U Dhaqaaqaan Xidigan- Rivaldo Oo Maamulka Camp Nou Tallo Muhiim Ah Siiyay. - Gool24.Net
Lautaro Martinez Ma Aha Xalka Barcelona, Waa In Ay U Dhaqaaqaan Xidigan- Rivaldo Oo Maamulka Camp Nou Tallo Muhiim Ah Siiyay.
March 26, 2020 Mahamoud Batalaale
Kooxda Barcelona ayaa si wayn u doonaysa saxiixa xidiga kooxda Inter Milan ee Lautaro Martinez laakiin halyaygii hore ee Barca ee Rivaldo ayaa sheegay in Martinez aanu ahayn xalka ay kooxdiisii hore u baahan tahay.
Rivaldo oo waqti cajiib ah ku soo qaatay Barcelona ayaa sheegay in xidiga ay maamulka Camp Nou ka daba dhaceen ee Lautaro Martinez aanu kooxda xal u keeni doonin wuxuuna soo jeediyay in dib loo soo celiyo Neymar Jr.
Barcelona ayaa muhiimada kowaad ka dhiginaysa in ay suuqa xagaaga la soo saxiixato Lautaro Martinez iyo Neymar Jr laakiin Rivaldo ayaa aaminsan in Neymar Jr uu noqon doono xalka ay Barca u baahan tahay.
Rivaldo oo qiraya in Lautaro Martinez aanu xal u ahayn Barcelona ayaa yidhi: “Lautaro waqti xaadirkan xal uma aha . Markastaba waxaa waajib ah in Neymar uu noqdo muhiimada kowaad ee xoojinta Barcelona”.
“Lautaro waa 22 sano jir kaliya, wuxuuna u baahan yahay in uu horumar sameeyo. Waxa uu u baahan yahay in uu khibrad ku helo heerka ugu sareeya si uu mustaqbalka ciyaratoy wayn u noqdo” ayuu Rivaldo hadalkiisa raaciyay.
Rivaldo oo sababahan u arka in Lautaro Martinez aanu hadda xal ugu ahayn Barcelona ayaa yidhi: “Sababahaas awgeed, waxaan aaminsanahay in ay Barca u baahan tahay in ay diirada saarto sidii ay dib ugu keeni lahayd Neymar ee xoojinta weerarkooda”.
Intaas kadib Rivaldo ayaa maamulka Barca u soo jeediyay in ay dadaal badan ku bixiyaan soo celinta Neymar wuxuuna yidhi: “Waxaa Barca hadda waajib ku ah in ay dadaal wayn ku bixiyaan Neymar iyada oo PSG u muuqata in ay aqbasho dalabyo xaqiiq ah. Waa halis in la dhamaystiro saxiix noocaas oo kale ah”.
Rivaldo ayaa shaqsi ahaan Neymar Jr ka door bidaya xidiga kale ee Lautaro Martinez oo ay Barca doonayso wuxuuna yidhi: “Neymar waa 28 sano jir, wali kubbad cagta oo badan ayaa isaga ku hadhsan. Saxiix wayn ayuu noqon doonaa. Neymar haddaba kooxda wuu garanayaa, shaqsiyadii ku haboonayd ayuu leeyahay, farqi wayn ayuuna ku samayn karaa ka garab ciyaarista Messi. Kamana baqanayo in uu Messi la qaybsado”.